Kumuu ahaa nebi Ilyaas? Sidee buu maanta na hagi karaa? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Nebi Ilyaas (ama Eliiyaah) waxaa lagu xusay magac ahaan saddex jeer suuradaha Al-Anam iyo As-saffat. Waxay noo sheegaan
Iyo Zakariye, Yaxye, Ciise ILYaas, Dhammaana waxay ahaayeen kuwo Suubban,
Ilyaasna Wuxuu ka mid ahaa Rasuullada.Markuu ku yidhi qoomkiisii miyeydaan dhawsaneyn (Eebe kayaabayn).Mawaxaad baryeysaan Bacli (Sanam) ood ka tagaysaan Eebaha abuurka wanaajiya.Ee ah Eebihiina iyo Eebaha aabayaalkiinii hore.Markaasay beeniyeen, waxaana loo soo kulmin (Cadaab).Laakiin adoomada Eebe ee niyada san (waxay lakulmi khayr). Waxaana ugu reebnay dadka danbe (amaan ah).Nabadgalyo ha ahaato Ilyaas korkiisa.Saasaana ku abaalmarinaa kuwa sama fala.Wuxuuna ka midyahay adoomadanada mu’miniinta ah
.As-Saffat 37: 123-132
Ilyaas waxaa lagu sheegay Yooxanaa (Yahya) iyo Ciise Masiix maxaa yeelay isaguna waa mid ka mid ah nebiyadii Kitaabka Quduuska ah. Sidii la sheegay, Elias (Eliiyaah) wuxuu ka hor yimid nebiyadii sanam Bacal. Tartankan waxaa si weyn loogu qoray Kitaabka Quduuska ah halkan. Hoos waxaan ku sahamineynaa barakadeeybteena (‘jiilalka dambe’ ee As-Saffat ballanqaado).
Ilyaas iyo imtixaankii nebiyadii Bacal
Ilyaas wuxuu ahaa nin qallafsan oo ka hor yimid 450 nebi oo Bacal ah. Sidee buu intan oo kale u mucaaradi karaa? Baybalku wuxuu sharxayaa inuu adeegsaday imtixaan xariif ah. Isaga iyo nebiyadii Bacalba waxay doonayeen inay neef allabari ah bixiyaan laakiin ma ay shidin dabka si ay u gubaan allabariga. Dhinac kastaa wuxuu baryi doonaa Ilaahiisa si uu dabka samada uga shido. Mid kasta oo Ilaah allabari ahaan dab ugu shiday dab samada ka yimid, kaasu wuxuu ahaa Ilaaha runta ah oo nool. Markaa 450 -kaas nebi waxay Bacal u yeereen maalin dhan si ay uga huraan allabarigooda samada – laakiin dab ma iman. Markaas Eliiyaah, keligiis, ayaa Abuuraha ugu yeeray inuu iftiimiyo allabarigiisa isla markiiba dab baa samada ka yimid oo wada gubay allabarigii oo dhan. Dadkii goobjoogga u ahaa tartankan ayaa markaas garanayey kan runta ah iyo kan beenta ah. Bacal waxaa la tusay inuu been yahay.
Annagu markhaatiyaal uma ahayn tartankan, laakiin waxaan raaci karnaa isla xeeladdii imtixaankii Eliiyaah si aan u ogaano haddii farriin ama nebi ka yimid xagga Ilaah. Istaraatiijiyaddu waa in la tijaabiyo si Ilaah iyo malaa’igihiisa oo keliya ay u guulaysan karaan oo kuwa awoodda kaliya ee aadanaha, sida nebiyadii Bacal, aysan awoodin.
Imtixaanka Ilyaas ee maanta
Maxay noqon doontaa imtixaanka noocaas ah, xagga ruuxa Elias,?
Suuradda An-Najm ayaa noo sheegaysa
Aakhiro iyo Adduunba Eebaa iska leh.
Eebbe oo keliya ayaa og dhammaadka wax walba, xitaa ka hor inta Aakhiro dhicin. Aadanuhu ma yaqaanaan Aakhiro intaanay dhicin, ka dib markay dhacaan. Sidaa darteed imtixaanku waa in la fiiriyo haddii farriintu si sax ah u saadaalineyso mustaqbalka waqti dheer kahor intaysan dhicin. Ma jiro qof sanam ama sanam ah oo waxan samayn kara. Ilaah kaliya ayaa kara.
Dad badan baa isweydiiya haddii Ciise sida ku cad Injilku yahay farriin dhab ah oo Eebbe ka timid, ama haddii ay been abuurteen dad xariif ah. Waxaan ku dabaqi karnaa imtixaanka Elias su’aashan. Buugaagta Tawreedka iyo Sabuur, oo ay la socdaan nebiyadii sida Eliyaas oo kale ayaa la qoray boqollaal, iyo xitaa kumanaan sano ka hor wakhtigii Ciise Masiix Kuwaas waxaa qoray nebiyadii Yuhuudda sidaas darteedna ma aha qoraallada ‘Masiixiyiinta’. Qoraalladan hore ma ku jiraan waxsii sheegyo si sax ah u saadaalinaya dhacdooyinka Ciise? Halkan waxaa ah soo koobidda waxsii sheegyada lagu sheegay Tawreed. Halkan waxaa ah soo koobista waxsii sheegyada ku jira Zabur iyo nebiyadii ku xigay. Hadda waad tijaabin kartaa sida Elias oo kale si aad u ogaato in Ciise Masiix sida ku qoran Injil uu dhab ahaan ka yimid xagga Ilaah, ama uu yahay dhalanrog been ah oo ragga ka yimid.
Surah Al-Anam oo lagu magacaabo Ilyaas iyo Yooxaana iyo Ciise Masiix. Waxa xiiso leh, Elias waxaa lagu sii sheegay buugga ugu dambeeya ee Axdiga Hore si uu u yimaado oo u diyaariyo qalbiyadeenna imaatinka Masiixa. Waxaan ku aragnaa Injiilka sida nebi Yaxya ugu yimid qaabkii Eliyaas si uu dadka uga hor yimaado una diyaariyo imaatinka Masiixa. Qofka Ilyaas laftiisu sidoo kale wuxuu ku xidhan yahay waxsii sheegyada Yooxaana iyo Masiixa.
Tags:about the prophet eliaselijah and the prophets of baalnabi eliasprophet elijah